ဘာသာဗေဒ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ရုရှား Gilyaki သို့ယူကရိန်းထံမှဘာသာပြန်ဆိုဖို့ဘယ်လို?
gilyak ကိုယူကရိန်းမှရုရှားသို့ဘယ်လိုပြန်ဆိုသလဲ။ Gljaka - "gilyaka" ၏ရုရှားဘာသာဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုမှု၌ ၎င်းသည် "boot" ဟူသောစကားလုံးတွင်ရုရှားကဲ့သို့နောက်ဆက်နှင့်ပါရှိသောအကိုင်းအခက်ဖြစ်သည်။ ရုရှားဘာသာတွင်ထိုကဲ့သို့သောစကားလုံးမရှိပါ။ အဘိဓာန် ...
slozhnosochinennogo နှင့်ဒြပ်ပေါင်းများစာကြောင်း staging အတွက်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများ,
slozhnosochinennogo နှင့်ဒြပ်ပေါင်းများစာကြောင်း staging အတွက်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများ, ရှုပ်ထွေးသောစာကြောင်း B.Sc (slozhnosochinennye) ၏ဆိုကျောင်းစာအုပ် SRYA, Syntax, နေရာချထား zapyatyh.Stavitsya: အဆက်သွယ်အစိတ်အပိုင်းများ, ဆိုးရွားသောနှင့်ခှဲခွားနှင့်အတူ BSc အကြား 1) ...
ကြိယာမစုံလင်ပြီးပြည့်စုံသောအမြင်အားဖြင့်ကြိယာ၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံကိုခွဲခြားဖို့ဘယ်လိုမေးခွန်းဖွကွေား: ဘာလုပ်ဖို့, မစုံလငျ: ဘာလုပ်သနည်း ဒါဟာလွယ်ကူ! ကြိယာ၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံကိုဘာလုပ်ရမှန်း၏မေးခွန်းကိုဖွကွေားနှင့် ...
အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကားအမျိုးအစားစာရင်းပြုစုပါ။ ပို, ပိုကောင်း။ ဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူအင်္ဂလိပ်
အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကားအမျိုးအစားစာရင်းပြုစုပါ။ ပို, ပိုကောင်း။ အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ချက် kjk နှင့်အတူလူတိုင်းရုပ်ရှင်မိမိအကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားရှိပါတယ် ...
ထိုသို့အဘယျသို့ Sema နှင့် sememe? တိကျတဲ့ဥပမာရှင်းပြပေးပါ။
ထိုသို့အဘယျသို့ Sema နှင့် sememe? တိကျတဲ့ဥပမာရှင်းပြပေးပါ။ Sememe သို့မဟုတ် semanteme (ဂရိဒီဇိုင်းကနေ; ။ phonemes ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ကဖွဲ့စည်းအသုံးအနှုန်း, morphemes) ဘာသာစကားယူနစ်အကြောင်းအရာလေယာဉ် ...
တည်နေရာသည်တည်နေရာနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ တစ်ခုမှာဘယ်မှာနှင့်အခြားသေးနှင့်မည်သို့။ ပုံမှန်အားဖြင့် 1 သည်ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ပြီး2သည်တတိယပါတီအရာဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ကွင်းဆက်ကိုကြည့်ပြီးအဖြေ: ဒီစကားလုံးတွေဟာလဲလှယ်လို့ရလား။
မည်သည့်စည်းမျဉ်းအားဖြင့်“ ခုနစ်ရာနှုန်းမှ” မဟုတ်ဘဲ“ ခုနစ်ရာနှုန်းမှ” မှန်ကန်သနည်း။
မည်သည့်စည်းမျဉ်းအားဖြင့်“ ခုနစ်ရာနှုန်းမှ” မဟုတ်ဘဲ“ ခုနစ်ရာနှုန်းမှ” မှန်ကန်သနည်း။ -sot- ကို“ note” ဟူသောစကားလုံးဖြင့်အစားထိုးပါ။ ထို့နောက်သင်မှားမည်မဟုတ်ပါ။ မှတ်စုခုနစ်ခုမှခုနစ်ရာမှဤတွင်ကိန်းဂဏန်းများ၏ကြေငြာခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဟုတ်တယ် ...
အဘယ်အရာမှန်သနည်း“ အဖြေကိုစောင့်သည်” သို့မဟုတ်“ အဖြေကိုစောင့်သည်”? ဆိုလိုသည်မှာ "ငါဘာကိုစောင့်နေတာလဲ" သို့မဟုတ် "ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ"?
အဘယ်အရာမှန်သနည်း“ အဖြေကိုစောင့်သည်” သို့မဟုတ်“ အဖြေကိုစောင့်သည်”? ဆိုလိုသည်မှာ "ငါဘာကိုစောင့်နေတာလဲ" သို့မဟုတ် "ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ"? ငါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ပြုထားသည်ထင် ... "စောင့်ဆိုင်း" ကြိယာဟာစွပ်စွဲသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇအမှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ခြားနားချက်က ...
ကျရုရှားနှင့်တူကြောင်းကိုစစ်မှန်သောလား? စစ်မှန်သော။ သို့သော်ဥရောပဘာသာစကားများရှိပါတယ်, ပိုပြီး Sanskrit ဆင်တူရုရှားထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဥပမာ, Gypsy နှင့် Ossetian ။ အီရန် (ဖာစီ) နှင့်အာဖဂန် (ရျှတို) ...
Tulle, ကုလားကာ - ဘယ်လိုမျိုး?
Tulle, ကုလားကာ - ဘယ်လိုမျိုး? tulle-male veil-bikang အချို့သောစကားလုံးများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျား၊ ဥပမာ - နာမ်။ _ shadow_ သည်တစ်ချိန်ကပုဂ္ဂုလ်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်အသေးအဖွဲပုံစံမှာ _tenk_ ဖြစ်သည်။ _Coffee_ တစ်ချိန်က _coffee_ - အထီး ...
နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားမေးခွန်းတစ်ခုကိုအတွင်းအပြင်သင်တို့အားငါရှင်းပြဖို့ကြိုးစားကြပါစို့။ ။ 8 နံနက်: ယခု 00 ဆိုပါစို့။ ဤသည်ကထိုနေ့၏အတိအကျ 8 နာရီဖွစျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။ ထိုအခါနဝမနာရီကစတင်ခဲ့သည်။ ယခုမှာ ...
1krepkaya ထည် 2krepky လူတွေ 3krepky နှင်းခဲ 4krepkaya ချစ်ကြည်ရေး for: synonym တွေဟာကောက်ကူညီ
အောက်ပါအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်: 1 ခိုင်ခံ့သောထည်2ခိုင်ခံ့သောလူ3ခိုင်ခံ့သောနှင်းခဲ4ခိုင်မာသည့်ခင်မင်မှု 1) ခိုင်ခံ့သောထည်၊ 2) ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ၊ 3) အေးခဲသောလတ်ဆတ်မှု၊
pіdkazhіtတောင်ပေါ်vіdredaguvati slovospoluchennya ယူကရိန်း၌တည်၏။ movі
pіdkazhіtတောင်ပေါ်vіdredaguvati slovospoluchennya ယူကရိန်း၌တည်၏။ Dumka yavna pomilka ... .priynyati chiys ဘီစီ (အပေါ်ရုပ်ပွားတော် ... ) otrimati uhvalu rstratsya uchasnikv zvdsi vihodit uklasti အတွက်movі Nevrno vikonuyuchy နောက်ခံပုံများနှင့်ဆက်လက် * yazki အတွင်းရေးမှူး Keruyuchy ကျဆင်းမှု ...
ဘီလာရုစ်, ဘီလာရုစ်, ဘီလာရုစ်? ဘယ်လိုလဲ ဘီလာရုသို့မဟုတ်ဘီလာရုစ်ကုန်ပစ္စည်းများ? ထိုသူသည်ဘီလာရုစ်သို့မဟုတ်ဘီလာရုစ်လား။
ဘီလာရုစ်, ဘီလာရုစ်, ဘီလာရုစ်? ဘယ်လိုလဲ ဘီလာရုသို့မဟုတ်ဘီလာရုစ်ကုန်ပစ္စည်းများ? ထိုသူသည်ဘီလာရုစ်သို့မဟုတ်ဘီလာရုစ်လား။ ရုရှားဘာသာတွင်ဘီလာရုစ်စကားလုံးသည်ဘာသာရေးအရဘာသာရေးသာမက၊ လူများ၏ဆင်းသက်လာသောအယူအဆများလည်းပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါ Erzyan Moksha အဘိဓါန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရှု? ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ? မီတာ။ ခ။ ဗစ်တိုးရီးယားမဆိုနှိုင်းယှဉ်, ဤတွင်, ဆင်းပြီးစကားအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူစားပွဲတစ်ခုရှိသည်: http://www.cigankin.ru/archives/581 များသောအားဖြင့် Mordvinians ...
ဂျာမန်။ အသုံးပြုသောအခါ nicht, kein, nichts အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
ဂျာမန် nicht, kein, nichts အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ nicht - no kein - nichts no - ဤရွေ့ကားငြင်းပယ်မှုကိုဖော်ပြသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ငါရှိနေတာဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူး ...
Ramil ကြောင်း oznichaet အမည်ပြောပါ။ ဒါဟာတတာနာမကိုအမှီ
Ramil ကြောင်း oznichaet အမည်ပြောပါ။ ဒါဟာအာရဗီဘာသာစကားအတွက်တာနာမကိုအမှီ Ramil အမည်, မှော်အံ့ဘွယ်သော, နိမိတ်ကိုဆိုလိုသည်။ အာရဗီဘာသာစကား Raml သဲ၌ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါဆိုလိုတယ် ...
“ အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်” ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်အမြဲသီးခြားဖြစ်သော်လည်း“ အပြစ်မဲ့” သည်အများအားဖြင့်စည်းလုံးမှုရှိသနည်း။ !
“ အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်” ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်အမြဲသီးခြားဖြစ်သော်လည်း“ အပြစ်မဲ့” သည်အများအားဖြင့်စည်းလုံးမှုရှိသနည်း။ ! ..a ကြိယာများမှ“ not” ကိုသီးခြားစီရေးသားထားသည်🙂သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်“ not” ကိုနာမဝိသေသနများ၊
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပျေါတိုးနီးရနျးဘာသာစကားသင်ယူဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မွို့၌မရှိဘာသာစကားကျူရှင်ဆရာများသည်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်မပေးပါတယ်!
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပျေါတိုးနီးရနျးဘာသာစကားသင်ယူဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မွို့၌မရှိဘာသာစကားကျူရှင်ဆရာများသည်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်မပေးပါတယ်! http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-links.html http://www.eestikeel.ru/ https://sites.google.com/site/eestikeelkool/ ကံကောင်းပါစေ! Estonian အဘိဓါန်ဘာသာစကားယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်ရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး ...
ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့်“ ငါလုပ်လိမ့်မည်” ဟူသည်အဘယ်နည်း။ စာလုံးပေါင်းနည်း၊ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့်“ ငါလုပ်လိမ့်မယ်” ဆိုတာဘာလဲ။ စာလုံးပေါင်းနည်း၊ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ jawohl စစ်တပ်တွင် - ဤမျှသာမန်ဘ ၀ ၌ - အတိအကျ၊ မှန်သော၊ သေချာပေါက်၊ သေချာပေါက် Ja wohl! ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 65 Next ကို 's Page
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,413 စက္ကန့်ကျော် Generate ။